Bixinta caalamiga ah: hel bilaash Google Pixel 2 XL | Androidsis
Bixinta caalamiga ah: hel Google Pixel 2 XL bilaash ah
Muxuu yahay gabal gabal dhac ah oo toddobaadkan asxaabteena ka socda Android Authority ay noo keeneen, wax intaa ka badan oo aan ahayn fursad aan ku helno Google Pixel 2 XL cusub, oo ah shirkadda shirkadda matoorka raadinta ee, markan, imaan doonta Spain, laakiin kaasoo qiimihiisu bilaaban doono ku dhowaad kun euro.
Hadda, waad ku mahadsan tahay deeqdan caalamiga ah ee cajiibka ah, waxaad fursad u heli doontaa inaad ku qaadato Google Pixel 2 XL bilaash oo waxaad ku raaxeysataa khibrada saafiga ah ee 'Android Oreo' mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan xilligan. Hagaag, maahan fursad, maxaa yeelay waxaad heli kartaa kaqeybgal badan waxaadna kordhin kartaa fursadahaaga inaad guuleysato. Haddii aad rabto inaad ku hesho Google Pixel 2 XL cusub bilaash, waad ogtahay, sii wad akhriska.
Waqtigan xaadirka ah waxaa abaabulay Maamulka Android oo kaashanaya MNML Case, oo ah soo saaraha daboolida aaladaha mobilada ee dhumucdiisuna tahay 0,35 mm oo keliya, taasna waxay leeyihiin, waxay awood u leeyihiin inay ka ilaashadaan terminaalka nabarrada iyo xoqida maalin kasta aad uga baqayaa in aysan wax badan ka difaaci doonin dhibcaha) iyadoo la ilaalinayo nashqadda taleefanka.
Kuwa aan weli aqoon u lahayn terminaalkan, labadaba Google Pixel 2 iyo Pixel 2 XL waxay bixiyaan astaamo qiimo leh oo ay ku jiraan Shahaadada IP67 iska caabinta boodhka iyo biyaha, mid ka mid ah kamaradaha casriga ugu fiican suuqa, Google Lens, saddex sano oo buuxa oo cusbooneysiin ah nidaamka hawlgalka damaanad qaaday, a 6 inch screen POLED iyo a 3.520 mAh baytariga.
Si aad fursad ugu hesho ku guuleysiga Google Pixel 2 XL ee bilaashka ah waa inaad booqo bogga internetka halkaasna waxaad ka heli doontaa habab kala duwan oo lagu helo saamiyada. Xusuusnow in, saamiyada badan, fursadaha badan ee lagu guuleysto. Laakiin xusuusnow sidoo kale in laguu oggol yahay oo keliya inaad kaqeyb gasho hal cinwaan e-mayl qofkiiba, haddaba si taxaddar leh u aqri shuruudaha isku aadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Dood-wadaag » Bixinta caalamiga ah: hel Google Pixel 2 XL bilaash ah
Weyn waan kaqeyb qaadan doonaa XD
ReplyASAP, oo ah codsi aad waxtar u leh waalidiinta dhalinyarada